Kooxda Jwxo-shiil, oo Waxyeeladeedu Isugu Soo Ururtay Gabalka Jarar – Rasaasa News
Kooxda Jwxo-shiil, oo Waxyeeladeedu Isugu Soo Ururtay Gabalka Jarar
Apr 30, 2012 Kooxda Jwxo-shiil, oo Waxyeeladeedu Isugu soo Ururtay Gabalka Jarar
Jijiga, Apr 30, 2012 [ras] – Kooxda Jwxo-shiil, oo sanooyinkii ugu dambeeyay ka waday degaanka Somalida falal arggagixisanimo ah, ayaa haatan isugu soo ururtay meelo ka mid gabalka Jarar[Dgagaxbur] oo kaliya.
Kooxda Jwxo-shiil, oo ay awoodeedu isugu soo ururtay Dhagaxbuur ayaan maalintii wax fala ka fulin karin gabalka, laakiin xiliga habeenkii waxyeelo u gaysata mararka qaarkood gaadiidka shacabka ee habeenkii socda.
Kooxda Jwxo-shiil, ayaa sida la sheegay xiliga waabarigii ah ku xabaala hubkooda meelo aan ka fogayn magaalooyinka, degmooyinka iyo tuulooyinka, dabadeedna shacabka dhex gala, gabaldhiciina dib ula soo baxa si ay wax u yeelaan shacabka.
Sida uu noo soo sheegay wariyaha degaanka u jooga shabakada rasaasa.com, ciidamada amaanka ee gabalka dhagaxbuur ayaa gaadiidka shacabka u diida in ay habeenkii socdaan si ay u yareeyaan khasaare ay gaadhsiiso kooxda budhacadu.
Gabalada kale degaanka Somalida Ethiopia ayeyna ka jirin xaalada budhcadnimo ee ka jirta meelo ka mid gabalka Dhagaxbuur. Gaadiidka ayaa socda habeen iyo maalinba dhamaan gabalada kale, iyaga oo aan qabin wax cabsi ah.
Qaybtii Afraad Sheekadii Xasan Mataan Axmed Xirsi